Articles tagged 'zim open'
McGuigan's record 63 narrows Fisher's lead 23 April 2017 HARARE - He might not be in the lead going into the final round, but Doug McGuigan has all the momentum after his third-round course-record equalling nine-under-par 63 on Saturday in the 2017 Zimbabwe Open at Royal Harare Golf Club. He made 10 birdies and a bogey and he climbed to 11-under-par...
Cairns, Charamba stay in hunt 22 April 2017 HARARE - Local golfers Ryan Cairns and Tongo Charamba flew the Zimbabwe flag high during yesterday's second round of the Zimbabwe Open tournament here. The two Zimbabweans now trail leader Trevor Fisher Jnr of South Africa, who equalled the Royal Harare course record of 63 during his second ro...
All set for Golden Pilsener Zim Open 11 April 2016 HARARE - With all the world attention centred on Augusta National for the ongoing Masters, local golf fans can also look forward to next week's Golden Pilsener Zimbabwe Open at Royal Harare Golf Club. The action will start on Monday with the pre-qualifying tournament where at least 80 hopefuls...
Delta reaffirms Zim Open partnership 8 April 2016 HARARE - Delta Beverages insists they remain committed to helping local golf improve shown by their continued support of the Golden Pilsener Zimbabwe Open championship. The tournament tees off next Thursday at the Royal Harare Golf Club with a field of at lead 141 golfers fighting for honours....
Jemusse wins Easter Open 4 April 2016 HARARE - Zhemba Jemusse feels his chess game is heading in the right direction after he was crowned the Easter Open winner in the capital Harare on Monday. The 19-year-old former Seke 4 High School student shrugged off challenges from top Zimbabwean opponents in Spencer Masango and Dion Moyo a...
130 entries for Zim Golf Open 24 March 2015 HARARE - At least 130 professional golfers from different tours around the world have so far entered for the Golden Pilsener Zimbabwe Open, the country's premier golf event. The golfers as well as qualifying amateurs will be battling for a piece of the R1.8 million winners' cheque. Since 2000,...
Jbe' wins second Zim Open title 14 April 2014 HARARE - Jbe’ Kruger Sunday carded a sensation final round 66 to rally from behind and add his name onto the exclusive list of golfers to have won the Zimbabwe Open twice. The 2010 Golden Pilsener Zimbabwe Open champion had a mountain to climb going into the fourth and final 18 holes at Royal ...
Sean Crocker eyes pro career 14 April 2014 HARARE - One of Zimbabwe’s brightest young golf prospects, Sean Crocker, believes he can turn professional sooner than later, says his father Gary. Gary Crocker, who played in Zimbabwe’s historic first-ever Test cricket match against Indian back in 1992 and went on to play two more in a shor...
Porteous poised for Zim Open glory 12 April 2014 HARARE - Haydn Porteous is one step closer to adding his name to the exclusive list of Golden Pilsner Zimbabwe Open champions after a sizzling third round performance saw him blaze to a four shot lead on Satarday. Porteous goes into the final round of the R1.8 million competition in prime posi...
Tongo still on the money 12 April 2014 HARARE - Tongo Charamba was on Friday left livid after blowing a golden chance to crawl up the Golden Pilsener Zimbabwe Open leaderboard but praised his composure as he dug deep to offset the poor start. After an inspiring first round 67, the Chapman-based golfer represented both extremes, dro...
Half a million dollars for Zim Open 22 March 2014 HARARE - At least 156 professionals will descend on Harare next month for the Golden Pilsener Zimbabwe Open title, which has been bankrolled in excess of half a million dollars. Zimbabwe's premier golf event will run from April 7 to 13 at Royal Harare with a pre- qualifier and the traditional ...
Tennis Zim cancels Zim Open 26 October 2013 HARARE – Tennis Zimbabwe (TZ) will not host this year's edition of the Zimbabwe Open tennis championship after the International Tennis Federation (ITF) proposed that it be held in December. TZ declined, saying the association could not host the country's flagship tournament during the festive...